Itiyoophiyaan Namoota Gara Kuma Sagalii Hidhuun Yaaddoo Uume
Hagayya 13, 2020
Maatii Obboo Dajanee Xaafaa
Itiyoophiyaan Walitti-bu'insa Baatii Dabreetii Booda Namoota Gara Kuma Sagalii Hidhuun Yaaddoo Uume Jedhama
Itiyoophiyaan walitti-bu’insawwan baatii dabre biyyattii keessatti dhiiga dhangalaasisee booda, namoota kuma sagalii ol hidhuu ishee, kan Mootummaa geggeessamu, Koomishinni Mirga Namoomaa biyyattii itti himuu isaa, maddi oduu Rooyiters gabaasee jira.
Kun immoo mootummaan jijjiirama akka fidetti faarsamaa ture gara toftaalee irreen-bultummaa akka mootummoota duraanii gargaaramuutti deebi’aa jira, yaaddoo jedhu uumaa jira.
Royiters akka gabaasetti kan bara 2018 taayitaa qabatan muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa – Abiyyi Ahimed, biyya Afrikaa hacuuccaan ol’aanaan keessatti geggeessamu keessatti jijjiiramawwan dimookiraasii fiduuf ka waadaa seenan yoo tahu, amma sab-boonummaa sab-lammootaa dabree dabree gara hookkaraatti jijjiiramu to’achuuf wal’aansoo qabaa jiran.
"Halkan Sa'aatii 10 ti balbala nurratti rukkutan"
Waa’ee lafaa, waa’ee qabeenyaa fi aangoo naannoolee irratti wal-falmiin ka’an akka walaba tahanii geggeessan kan taasise – Muummichi-ministaraa Abiyyi, amma garuu bilisummaa lammiwwanii kichuutti jiru ehamuu, kan bara dabre Noobelii Nagaa isaan badhaasise sana itti fufuuu irratti danqaaleen isaan mudatee jira.
Itiyoophiyaa keessatti bara 2021, filannoo walabaa fi madaalawaa isa jalqabaa geggeessisuuf ka waadaa seenanii turan yoo tahu, silaa biyyattii Afrikaa keessatti lakkoobsa uummataan lammaffaa taate – Itiyoophiyaa keessatti mallattoo jijjiiramaa guddaa taha ture.
Tahus garuu, Koomishinni Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa, mootummaan geggeessamu akka jedhutti, Waxabajjii 29 wallisaan beekamaan – Haacaaluu Hundeessaa rasaasaan ajjeesamuu irraa mormiin ka’ee magaalaa Fininnee fi naannoolee itti dhihoo jiran keessatti walumaa-galatti lubbuu namoota 178 ol galaafatee booda namoota gara kuma sagalii tu hidhame.
Waa’ee hidhaa kanaa irratti akka deebii gama mootummaa kennan ka Rooytersiin gaafataman, dubbi-himtuun muummicha-ministaraa Itiyoophiyaa – Billenee Siyyum, seera kabajchiisuun tarkaanfii hatattamaa akka tahe dubbatan.
“Qoodnii fi itti gaafatamni mootummaa inni duraa nagaa fi tasgabbii mirkaneessuu dha. Ol’aantummaa seeraa eegsisuu dha. Tarkaanfiileen torbanneen dabran fudhatan calaqqee heeraa fi seera eegsisuu ti,” jedhan – Billeenee Siyyum.
Qeeqxonni muummicha-ministaraa Abiyyi immoo, haalli rifaasisaan durii akka deebi’ee dhufetti dubbatan.
Iyyati Obbo Jawaarfaan Dhiyeeffatan Fudhatama Hin Arganne
Ilhaan Omar Marsaa Lammataaf Injifatan
Hoogganaan Waldaa Maccaa fi Tuulamaa Humnoota Mootummaatiin Reebame, Jedhan
Duula Farra Dhukkuba Vaayrasii Koronaa
Haleellaan Somaaliyaa Keessatti Raawwatame Lubbuu Galaafate
Duuli Filannoo Naannoo Tigraay Jalqabame
Muummichi Miinisteeraa Abiy Ahimed Haasaa Prezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kan Baatii Saddeet Duraa Fudhatama Dhabsiisan
Muummee Ministera Lebanon Hassan Dihaabii fi Kaabineen isaalleen yaayyuu hujii irraa bu’an
Koreen Naamusaa fi Tohannoo ABO Sochiiwwan Wal-dhibdee Hammeessan Ugguruu Dubbata